Xukuumada Eritariya Ogaden ma Ciil bay ka Gudanaysaa Mise Caawin bay u Haysaa. – Rasaasa News
Xiliyadii 1970s kii labdii Xafiis Jabhada Ogaden iyo eritariya waxaa ay ahaayeen kuwo isku dhinac yaal, waxaana kaalmayn jirtay xukuumadii Somaliya oo u Ololayn jirtay sidii ay ku heli lahaayeen labdan Jabhadood xoriyad . Waxaana ay colaad xoog leh ka dhaxaysay dalalka Itobiya iyo Somaliya oo iyagu midna ay ahayd xornimo doon kalkaal midna xukun dumis, waxaana ugu dambayntii isla god galay labdii xukuumadeed ee Somaliya iyo Itobiya.
Waxaana dhacday in Somaliya uu ka dhacay xarbul ah, Itobiyana waxaa qabsaday Labad jabhadood oo isla socda oo labdoodaba laga taageeri jiray Somaliya, waxaa weeye Jabhada Eritariya [EPLF] iyo Jabhada Tigray [TPLF], kolkii ay u suurto gashay in ay hantaan xukunka Itobiya, waxay bilaabeen in ay dagaal ku qaadaan Jabhada Ogaden. Waxaana suurto gal noqon wayday in ay maamulka si sharaf leh looga qayb galiyo Jabhada Somalida Ogaden.
Dagaalo xoog leh ayaa ku dhexmaray Jabhada ONLF iyo labadan jabhadood ee kale waxaana halkaasi ka bilaabatay colaad, dagaaladii ka dhacay birqod waxaa lagu laayey ciidamdii Jabhada EPLF, waxaana aqoonsigoodii ay ku soo bandhigtay Jabhada ONLF warfaafinta.
Eritariya waxaa ay si dhib yar uga qaadatay xornimadeedii Jabhada TPLF oo ay wada qabteen Itobiya, waxaana colaad loo qaaday Jabhad ONLF, oo iyada loo arkayey in ay tahay ka Jinsi duwan.
Shan sano ka dib waxaa uu dagaal faraha lagaga gubtay ka dhex dhacay labadii Jabhadoo EPLF iyo TPLF oo xiligan kala matala labada dal ee Eritariya iyo Itobiya, waxaana ka dhacay colaad xun oo markii dambe keentay in midba mida kale uu damcay in uu xukunka ka caydhiyo, nin xoolo leh dad uu dirto ma waayee waxaa degdeg ay eritariya ugu yeedhay cadowgeed shalay oo ay baahi badan ku og tahay oo ay jeclaatay in ay marti galiso si uu isagu dantiisa u gaadho iyana ay danteeda u gaadh. Waxaase xaqiiq ah in ayna labada danood isla ekaan karin balse mid umbaa aad looga faa,iidaysan.
Ururka ONLF, oo adeegsanaysa nin baahani waa gun ayaa dirba hoos gashay xukuumada Eritayiya, una dhiibatay arimahaheedi siyaasadeed iyo mideedii baahi dhaqaaleba Eritariya.
Waxaa si haqab la,aan ah hub iyo tababo barba loo siiyey ururka ONLF, oo wixii loo diraba aan diiday odhan, amrada iyo istiraatijiyada dagaalkna waxaa dajinayey saraakiisha Eritariya. Waxaana ay bilowday eritariya in ay ku dabakhdo dhaqankeeda dagaal Jabhadaha ka dagaalamyey dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dirbadiiba waxaa uu shacabka Somalida Ogadeeniya Saluugay sida ay wax u socdaan, waxaa soo baxday amar iyo qalafsanaan aan hore looga baranin Jabhada, Meeshii go,aamada kulan lagu qaadan jiray waxaa soo baxday in uu gudoomiyaha ay xukuumada Eritariya kaliya amarto waxa uu samaynayo. Waxaa uu saluug ka soo baxay Xubno sare oo ahaa hogaaminta oo dirba isha la raacay sida ay wax u socdaan, durba waxaa sanka la taabtay kii odhan waaya amar dawlo mudeec, calool xumadii soo kala dhexgashay ururka xubnihiisa Eritariya gawska dambe ayey ka qosashay, intii ay dhexdhaxaadin lahaydna waxaa ay la safatay xubno si ay isugu disho oo ay u qaadato kuwa amarkeeda ogol.
Waxaa Soo baxday in aan sharciga la raacin balse shanta la raaco, hadii shir loo baahdo waxaa la aadi Caasmara, hadii talo qaadasho loo baahdo waxaa la aadi Caasmara, waxay hoy u noqotay xarunta eritariya Hogaanka Jabhada oo inta badan iska jooga eritariya. Waxaa loo furay Ideecada aan ku hadlin afka Jabhad, waxaa la mataaneeyey ururkii dib u xoraynta Somaliya iyo ururka ONLF.
Taladii, xubnaha ururka waa laga maarmay, dhaqaalhihii shacabka waa laga maarmay, sharcigii Jabhad waa laga maarmay, waxaana meshaas ka soo baxay in arintii qadyadu noqoto arin dhaxtaal eritariya iyo Itobiya. Shacabka Somalida Ogadeeniya waa shacab gumaysi ku jira dadkuna waxaa uu ku hoosnool yahay xukuumada Itobiya wax walba oo ay u baahan yihiin waxay ku khasban yihiin in ay ka helaan xukuumada Itobiya, waaba hadii ay wax u ogolaatee.
Jwxo-shiiladu waxaa ay bilaabeen in ay dab galiyaan shacabka ku dhex nool magaalooyinka iyaga oo odhanaya way nala shaqeeyaan [Tusaale waxaa inoogu filan Ibrahin xaad in kasta oo uusan khayr lahayn hadana halka uu maanta ku jiro waxaa ku riixay Jwxo-shiil]. Waxaa kale oo bilaabtay in Jwxo-shiiladu intii ay gubi lahaayeen gaadiidka ciidamad in ay gubaan xabad xabada Ambalaasta ah ee joogta degmooyinka, Intii ay Jwxo-shiiladu weerari lahaayeen xeryaha ciidamada waxaa ay weerareen Isbitaalada tirada yar ee ku yaal degmooyinka.
Intii ay ka garab dagaalami lahaayeen Jabhadaha dalka u dhashay iyo dhulka Ogadeeniya, waxay Jwxo-shiiladu doorteen in ay ka garab dagaalamaan Jabhadaha Oromada iyo dhulka Orormada. Waxay cadow ka dhigteen Jabahada dalka u dhashay waxay saaxiib ka dhigteen Jabhada Qoomiyadaha kale sida Oromada.
Hadaba, waxaa isweydiin leh Xukuumada Eritariya ma waxay wadaa caawin iyo in ay ka qayb qaadato sidii loo xoreyn lahaa Ogaden, mise waxay nagu fushanaysaa danaheeda gaarka, kuwa ay hoosta soo gashatay ee aan dan iyo aaba ttona ka lahayn dalka iyo dadkana waxaa ay ku fushanayaa danaheeda gaarka iyaguna waxaa ay ku xabisan yihiin Caasmara.
Waxaa kuu furan Qormadan Dood
Go,aamo Dhaxal Gal ah oo ka Soo Baxay Shirkii Jaaliyadda Somalida Ogadeeniya ee Magaalada Minneapolis Maalintii Sabtida June 6, 2009.